Dowlada Somaliya Oo si Adag Uga Hadashay Duqaymaha Kenya ka Fuliso Somaliya. – Heemaal News Network
War saxaafadeed caawa kasoo baxay Wasaarada arimaha dibadda Xukuumada Soomaaliya ayaa si kulul loogu cambaareeyay duqeyn ciidamada Cirka Kenya ka fuliyeen deegaano katirsan Gobolka Gedo, duqeyntaas ayaana lagu dilay dad shacab ah.
Wasaarada arimaha dibadad warka kasoo baxay ayaa lagu sheegay in duqeyn ciidamada Kenya ka geesteen deegaanada Ceel Cadde iyo Hisa u gur lagu dilay dad shacab ah ay ku jiraan haween iyo caruur guryahooda joogay.
”Dowladda Federaalka waxay si adag u cambaareyneysaa duqeymaha joogtada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Kenya ,Weerarkii cirka ee aan loo aabbo yeelin ee ka dhacay Ceel Cadde iyo Hisa-u-gur ee gobolka Gedo, 3dii Juun 2021, waa tusaalihii ugu dambeeyay ee hawlgallada Ciidanka Difaaca Kenya (KDF) ee sababay dhimashada iyo naafaynta dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruurta” ayaa lagu yiri qoraalka dowlada kasoo baxay.
Xukuumada Soomaaliya ayaa ku eedeesay in ciidamada Kenya in ay u shaqeeyaan qaab ka baxsan waajibaadka iyo habka shaqo ee ciidamada AMISOM, waxa ayna ku eedeesay Dowlada federaalka Ciidamada Kenya in marar badan dhibaato gaarsiiyeen dad shacab ah.
”Waxaa muuqata inay sii kordheyso daandaansiga iyo kala sooc la’aanta ay ciidamada KDF ay howlgalada ka fuliyaan Soomaaliya, iyagoo ku marmarsiyoonaya la dagaalanka xagjirnimada, waxna ku soo kordhin doonin dadaallada loogu jiro xasilinta iyo ka hortagga xagjirnimada laakiin kaliya waxay sii xagjirineysaa beelaha taageera xag-jirnimada. Dadka rayidka ah iyo hantidooda waa inaysan waligood noqon bartilmaameedka ficil militari.” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowlada Soomaaliya.
Wasaarada arimaha Dibadda ayaa sheegtay in ay soo bandhigi doonto walaaca ay ka qabto ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya, kuwaa ay sheegtay in hab ka baxsan nidaamka ciidamada nabad ilaalinta u dhaqmayaan una dhibaateenayaan shacabka.
Warkan kasoo baxay Xukuumada Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili ciidamada cirka Kenya duqeymo ay ka geesteen deegaano katirsan gobolka Gedo ku dileen kuna dhaawaceen dad shacab ah ay ku jiraan haween iyo caruur isku qoys ah.
Axmed Madoobe Oo Kulan Gaata la Yeeshay Jeneraal Amisom Iyo Saraakiil kale.